Madaxweynaha Hiirshabeele oo sheegay in dagaalka Alshabaab kaso horjeedan dad muqdisho jooga – Radio Daljir
Madaxweynaha Hiirshabeele oo sheegay in dagaalka Alshabaab kaso horjeedan dad muqdisho jooga
Abriil 5, 2018 11:54 b 0
Madaxweynaha Maaulka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare ayaa si kulul uga hadlay howlgallada ka dhanka ah AL-shabaab ee ka socda Gobolka Hiiraan iyo sababta keentay in howlgalkaas uu hakad galo.
Madaxweyne Waare ayaa sheegay in markii Maamulka Hirshabeelle uu isku dubbariday Ciidan la dagaallama Al-shabab ee ay billaabeen howlgalka oo uu sheegay in guulo muhiim ah laga gaaray rabsho laga abuuray Beledweyne.
Waxaa uu intaas ku daray in Ciidamadii Maamulka oo howlgal ku maqan Magaalada dhexdeeda la dhigtay isbaarooyin kala duwan islamarkaana ay qasab noqotay in uu hakado howlgalka.
Waare ayaa dad uusan sheegin Magacooda oo jooga Muqdisho ku eedeeyay in ay lacag ku bixiyaan in uusan guuleysan howlgalka ka dhanka ah AL-shabaab islamarkaana uu istaago.
Prof: Cabdi Ismail Samatar oo ka hadlay Khilaafka Barlamaanka